Xamarweyne - Wikipedia
Xamarweyne, waa degmo ku taalla magaalada Muqdisho ee Gobolka Banaadir. Magaca Xamarweyne wuxuu ka yimid Xamarki duqoobay; 1600 ama qarnigii 16-aad xamarweyne waxay aheyd dhul xeebeed banaan oo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqato ah & dad kalluumeysato ah kana soo kala jeeda wadamo kala duwan oo carbeed waa halka ugu qaddiimisan koofurta iyadoo leh taariikh soo jireen ah, oo eyna ka soo taliyeen boqortooyooyin kala duwan rugna u aheyd ganacsigi barigi Afrika qarnigii 16aad illaa iyo kii 19aad. Degmada Xamarweyne waxey dhacdaa xeebta ee Badweynta Hindiya, dhererka xeebteeda waxey gaareysaa 1.2km. Dhanka waqooyi waxaa ka xiga degmada Wardhiigley iyo Boondheere, Dhanka barina waxaa ka xiga degmada Shangaani, koofur waxaa.ka xiga Badweynta Hindiya Galbeedna waxaa ka saaran Xamar Jajab noocyo badan sii kala leh sida Yuumbi, Jeedar, Tartaba iyo kuwo la mid ah. Xamar Weyne waa degmo xusuus badan leh oonan la iloobi karin sababtoo ah waxaa lagu yaqaan quruxda iyo saraha dhaadheer ee ka dhisan ku waasoo dadka eey ka fiirsadaan xeebta. Meela badan oo muhiim ahna weey ku yaalaan sida xarunta gobolka banaadir bacadlihi ugu weyna e dalka kawaanka ugu weyn e kaluunka somalia masaajidka Marwaas, Isnaa Casheri kaasoo ahaa masaajidkii ugu horeeyay ee laga furay dalka. Arbaca Rukun waa masaajid taariikh weyn lah.
xamar weyne waxay caan kutahay wadooyin sida wadada via-roma, wadada Xasan Geedi Abtoow ee De Martini Hospital hor marta iyo isbitaaka ugu wayn muqdisho sida isbitaalka martini,Muqdisho Mall, City Mall.
Xuduuda waxaey la leedhay 1. Wardhiigley 2. Boondheere 3. shangaani 4. Xamar Jajab.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xamarweyne&oldid=219900"
Last edited on 16 Oktoobar 2021, at 14:55
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Oktoobar 2021, marka ee eheed 14:55.